कतै तापईको नियमित चाउचाउ खाने बानी त छैन ? सावधान ! यस्तो समस्या झेल्नु पर्ला !! - ज्ञानविज्ञान
सस्तो अनि सजिलै भोक मार्न चाउचाउ सबैभन्दा चर्चित खानेकुरा हो। काँचै वा सुप बनाएर खान सकिने चाउचाउ स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। साच्चै कति हानिकारक छ पढ्नुस्ः
मासाच्युसेट्स जनरल हस्पिटलका ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट डाक्टर ब्राडेन कुओको खोज अनुसार घरमै बनाइएको चाउचाउ शरिरले १-२ घण्टामा नै पचाउँछ जबकी बजारको चाउचाउ घण्टौँसम्म पेटमै रहन्छ, शरीरले सहजै पचाउन सक्दैन। चाउचाउ सुरक्षित राख्न यसमा राखिने प्रिजरभेटिभ केमिकलको कारण पेटलाई यो पचाउन गाह्रो हुने हो।
अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (FDA)को अनुसार यदि चाउचाउ नियमित खाँदा ट्युमर वा क्यान्सरको सम्भावना बढ्छ। चाउचाउमा हुने Tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ) नामक प्रिजरभेटिभ (सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने केमिकल) पर्यफ्युममा प्रयोग गरिने केमिकल हो। यसले भित्री अंगहरुलाई कमजोर बनाउँछ। TBHQ बाहेक चाउचाउमा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रयोग गरिन्छ। यो सूर्तिजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिने केमिकल हो।
साथै चाउचाउमा अन्य सेन्थटिक केमिकल जस्तै कर्न सिरप, पाल्म र मोनोसिडियम ग्लुटामेट (MSG) हुन्छ।
अर्थात चाउचाउ खानु हानीकारक रसायन सेवन गरे सरह हो। बरु घरमै आफैले बनाएर खान सकिन्छ तर प्याकेटमा आएको चाउचाउबाट परै रहनु नै आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनु हो।
कुन चाउचाउ खाने कुन नखाने ?
अखाद्य सामाग्री मिश्रित म्यागी चाउचाउलाई भारतका विभिन्न राज्यहरुमा प्रतिबन्ध लगाईएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि उक्त ब्राण्डको चाउचाउको गुणस्तरको बारेमा आशंका गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले म्यागी नुडल्सको आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो ।
म्यागी चाउचाउमा अखाद्य सामाग्री मिसाईएको भारतमा भएको अनुसन्धान तथा प्रतिबन्ध र नेपालमा गरिएको प्रतिबन्धले पुष्टि गरिसकेको छ । फलस्वरुप उक्त कम्पनीले बजारबाट म्यागी चाउचाउ सम्पूर्णरुपमा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरि वाइवाइ चाउचाउसहितका अन्य ब्राण्डका चाउचाउमा पनि उल्लेखनीय मात्रामा अखाद्य सामाग्री भेटिएको हुँदा भारतका केहि प्रान्तमा ती ब्राण्डका चाउचाउको बिक्री बितरणमा पनि बन्देज लागेको छ ।
विभिन्न चाउचाउ भारतमा र नेपालमा प्रतिबन्ध भईरहेको समयमा कुन चाउचाउ गुणस्तरीय र खान योग्य छ भनेर उपभोक्ताहरु असमन्जस्यमा परेका छन् । नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा चाउचाउ उत्पादन र खपतको हिसाबले अग्रपंक्तिमा आउँछ । नेपालमा हाल विभिन्न ब्राण्डका चाउचाउहरु उपलब्ध छन् ।
‘रेडी टू इट’ देखि पकाएर खाने ह्वाइट नुडल्ससम्म नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । नेपालमा उपलब्ध भएका मध्ये अधिकांश चाउचाउ स्वदेशी उत्पादन नै हुन् । नेपालमा चाउचाउलाई खाजा वा खाना दुबैको रुपमा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि निकै छ । विशेषगरी नेपालमा बालबालिकाहरुले चाउचाउ निकै मनपराउने गरेका छन् ।
नेपालभित्र मात्र होइन नेपाल बाहिर पनि नेपाली चाउचाउको माग बढिरहेको छ । व्यापार निकासी तथा प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पहिलो आठ महिनामा मात्रै ६० करोड रुपैंया बराबरको चाउचाउ विभिन्न मुलुकहरुमा निर्यात भएको छ । नेपाल तयारी चाउचाउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । नेपालमा अहिले सातवटा उद्योगले तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्दछन् जसमा ५ अर्ब रुपैंया भन्दा बढि लगानी रहेको छ भने दर्जनौं ब्राण्डहरु बजारमा छन् ।
नेपालमा उपलब्ध भएका मध्ये वाइवाइ, मायोज, रमपम, रारा, मिहोलगायतका केहि ब्राण्ड निकै चलेका चाउचाउ ब्राण्ड हुन् । म्यागीलाई भारतमा र नेपालमा तथा वाइवाइलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा चलेका अन्य ब्राण्डका चाउचाउको विषयमा पनि चर्चा र आशंका शुरु भएको छ । नेपाली ब्राण्ड वाइवाइ भारतका केहि प्रान्तमा प्रतिबन्ध भईसकेको छ भने त्यसमा अनुसन्धान पनि शुरु भईसकेको छ । उक्त चाउचाउमा अजिनामोटो लगायतका अखाद्य पदार्थ मिसाएको भन्दै प्रतिबन्ध लागेको हो । जसले गर्दा अब के सबै नेपाली चाउचाउ गुणस्तरहिन छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
केहि कम्पनीहरुको गलत कार्यले गर्दा नेपालमा अजिनामोटो नराखिएका अन्य चाउचाउका ब्राण्डलाई पनि असर पार्ने देखिन्छ । कुनै ब्राण्डको चाउचाउ नराम्रो भयो भन्दैमा सबै चाउचाउलाई एकै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने चाउचाउ ब्राण्डहरु पनि छन् । त्यसैले चाउचाउलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने होइन की त्यसको गुणस्तरको विकासमा ध्यानदिनुपर्ने उनको तर्क छ । विभागकाअनुसार नेपाली ब्राण्डका चाउचाउहरुको नियमितरुपमा परिक्षण पनि हुने गरेको छ । त्यस्तै केहि चाउचाउ उत्पादकहरुले अजिनामोटो (एमएसजी) नमिसाएको भनेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने गरेका छन् ।
उदाहरणको लागि नेपालको चर्चित एक चाउचाउ ब्राण्डले चाउचाउको बाहिर खोलमा नै “नो एडेड एमएसजी” अर्थात अजिनामोटो नमिसाएको भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपालमा केहि अन्य ब्राण्डले पनि अजिनामोटो नमिसाईकन चाउचाउ उत्पादन गरिरहेका छन् । यस्ता अजिनामोटोरहित चाउचाउ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट उपभोग गर्न सकिने खाद्य प्राविधिकहरुको भनाई छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो चाउचाउ ब्राण्डले नेपाली उपभोक्तालाई नै ध्यानमा राखी उच्च गुणस्तरीय प्रविधिबाट स्वस्थकर र स्वादिष्टरुपमा उत्पादन गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । केहि नेपाली ब्राण्डले नेपाल गुणस्तरका साथै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाण चिन्ह पनि पाएका छन् । नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तोकेको मापदण्डको आधारमा मात्र उत्पादन हुने चाउचाउ हरेक व्यक्तिले आफ्नो रुचिअनुसार उपभोग गर्न सक्दछन् ।
उपभोक्तावादिहरुले पनि नेपाली ब्राण्डका चाउचाउको गुणस्तरमा भन्दापनि सरकारी खाद्य प्रयोगशालाको क्षमताको बारेमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अब उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन कम्पनीले आफैंले गुणस्तरीय उत्पादन हो भनेर प्रमाण दिनुपर्ने र उपभोक्ताहरु पनि अखाद्य वस्तु मिसाएको चाउचाउको बारेमा सजग हुनुपर्ने उपभोक्तावादिहरुको भनाई छ ।
उपभोक्ता नै बजारको राजा हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा दिएर आफ्ना उत्पादनहरु बजारमा ल्याउने हो भने समस्या नै नहुने अवस्था आउँछ । यदि नेपाली चाउचाउ गुणस्तरीय नहुँदो हो त खाद्य उत्पादन र उपभोगमा निकै कडा कानुन भएका मुलुकहरु जापान, अमेरिका, कतार, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा नेपाली चाउचाउ निर्यात हुन सक्दैन थियो होला । उपभोक्ताहरु पनि आफैं सजगहुँदै अजिनामोटो र अखाद्य सामाग्री नमिसाएका चाउचाउ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले अब उपभोक्ताले चाउचाउ किन्दा अजिनामोटो नभएको चाउचाउ दिनुस भनेर मात्रै पसलेसँग माग्ने हो की ।
के हो मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) ?
मोनोसोडियम ग्लूटामेट एशियन क्षेत्रका विशेषगरी चीन, जापानमा खानाहरुमा स्वाद बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसमा सोडियम नामक तत्व पाइन्छ र नुनमा पाइने मात्राभन्दा १/३ मात्रा यसमा पाइन्छ । यसमा हुने ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट एमिनो एसिड हो जुन टमाटर, च्याउ, सोयाबिनलगायतका उत्पादनहरुमा प्राकृतिकरुपमा नै रहेको हुन्छ ।
एमएसजीलाई एक्साइटो टक्सिनका रुपमा विशेषज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन्, जसले हाम्रो कोषिकाहरुलाई बढि उत्तेजित बनाउँछ, जसका कारणले हाम्रो मस्तिष्कको कोषहरुलाई नष्ट गर्नुका साथै मृत्युसमेत हुने संभावना रहन्छ । विभिन्न अध्ययनहरुमा एमएसजीको मात्रा बढि हुँदा हाडलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
वाइवाइ चाउचाउ खाँदै हुनुहुन्छ ?
पालमा सर्वाधिक बिक्री हुँदै आएको वाइवाइ चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थमा विषादी रहेको भेटिएको छ । सोही कारण भारतमा सो चाउचाउको बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वाइवाइ चाउचाउमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपाली ब्रान्ड (उत्पादन) मानिने वाइवाइ चाउचाउमा धेरै अखाद्य तत्व रहेको पुष्टि भारतको तामिलनाडुस्थित खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानअनुसार वाइवाइ चाउचाउमा ७ दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (सिसा) रहेको भेटिएको छ । लिडको मात्रा सबै चाउचाउमा हुने गर्दछ, तर दुई दशमलव पाँच पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विषादीसरह मानिन्छ ।
वाइवाइ चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टि सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मूत्राशयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । साथै, गर्भवती तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा यस्तो लिडले सबैभन्दा ठूलो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले जनाएका छन् ।
वाइवाइ चाउचाउको प्रयोग बढेसँगै दक्षिणी भारतमा पाठेघर खस्ने, महिनाबारी गडबड हुने, गर्भपतन हुने, सुस्तमनस्थितिको बच्चा जन्मिने, महिनाबारी भएका बेलामा पेट दुख्ने, योनिबाट सेतो पानी बगिरहनेलगायतका समस्या बढी देखिएपछि सो चाउचाउको बिक्रीवितरणमा रोक्नै लगाएको हो । त्यहाँ एकाएक यस्ता बिरामी बढेपछि हरेक खाद्य सामग्रीको परीक्षण सुरु गरिएको थियो ।
विशेषगरी जंक फुडहरूले यस्तो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले बताउँदै आए पनि अत्यधिक मात्रामा वाइवाइ चाउचाउ खानेहरुमा सो समस्या देखा परेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चाउचाउमा अखाद्य तत्वको मात्रा भेटिएपछि तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर वाइवाइ चाउचाउमा परीक्षण गर्दा कहालीलाग्दो परिणाम देखिएको तामिलनाडुमा सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा भनिएको छ ।
खाद्यविद्का अनुसार चाउचाउमा पाइने लिडले सबैभन्दा छिटो असर स्नायु प्रणालीमा पु¥याउनेछ । हेर्दा आकर्षक र स्वादिलो चाउचाउमा २० प्रकारका रसायनहरू प्रयोग गरिँदै आएको छ, ती सबै रसायनहरू अखाद्य हुन् । वाइवाइ चाउचाउमा अरु चाउचाउले समेत प्रयोग नगरिएको अखाद्य रसायन मोनोसोडियम ग्लुकोमेट समावेश गरिएको भेटिएको छ । मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायनले टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने, श्रवणशक्ति नै गुम्ने, जिब्रोले स्वाद पाउन छाड्नेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
यसैगरी, आकर्षक देखाउन सिन्थेटिक (एक प्रकारको प्लास्टिक) समेत वाइवाइ चाउचाउमा प्रयोग गर्ने गरिएको फेला परेको छ । जसले बच्चाहरूलाई बढी असर पु¥याउने विज्ञहरूले जनाएका छन् । जसका कारण बच्चालाई एलर्जी हुने, त्यही चाउचाउबाहेक अरु खानेकुरा नरुच्ने, स्मरणशक्ति कमजोर हुने, पढाइमा ध्यान नजाने, छिटो रिसाउने, एकलै बस्ने, एकोहोरो हुनेलगायतका समस्या देखा पर्दछन् । यसैगरी, वाइवाइमा बीएचए र बीएचटीजस्ता डरलाग्दा रसायनसमेत भेटिएको छ । यी चाउचाउमा प्रयोग हुने तेलमा यस्ता डरलाग्दा रसायनहरू फेला परेका हुन् । यी रसायनहरूलाई क्यान्सरको स्रोत नै मानिन्छ ।
यसैगरी, वाइवाइमा स्वाद बढाउनका लागि अजिनोमोटो नामक रसायन पनि अत्यधिक मात्रमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । नुन नमिसिँदासम्म अजिनोमेटो रसायन खासै हानिकारक मानिँदैन, तर यो रसायनमा नुन मिसिनासाथ तेजाब जस्तै अर्को रसायन बन्छ । जसले आन्द्रा र पेटमा प्वाल पार्ने, अपच हुने, कब्जियत बढ्ने, श्वास फेर्ने गाह्रो हुँदै जाँदा दमको रोग उत्पन्न हुनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरुको दाबी रहेको छ ।
खानेकुराका नाममा विषादी बिक्रीवितरण भएर देशभरका अस्पताल भरिएपछि भारतले बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा भने सो चाउचाउको कुनै परीक्षण गरिएको छैन । नेपालमा वाइवाइ चाउचाउलाई विना कारबाही बिक्रीवितरण गर्न दिइएको छ । वाइवाइ चाउचाउ उत्पादन गरेर विष बेच्ने गरेका विनोद चौधरीको अवैध कारोबारमाथि भने सरकारले कुनै कारबाही नगर्दा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन् तीव्र हुँदै गएको छ । न्यूज अभियानका लागि आर्थिक दैनिकका साथमा ।
Don't Miss it के तपाईलाई थाहा छ, मेकअप लगाएर किन सुत्न हुँदैन ? जानिराख्नुहोस
Up Next के खुसार्नीको पनि एक्स्पाईरी डेट हुन्छ ? थाहापाउनुहोस्
तपाईलाई काँक्रोका चमत्कारी फाइदाहरु थाहा छ ? कति धेरै फाइदा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि जानीराखौ
काँक्रो गर्मि मौसममा धेरै लाभदाहि मानिन्छ । यसमा ९६ प्रतिशत पानि हुन्छ । काक्रा हामी तेतिकै खान सक्छौ भने यसलाई…